ခွေးလေးကို ကယ်တင်ဖို့ မိကျောင်းခေါင်းတိုနဲ့ နပန်းလုံးခဲ့တဲ့ အသက် ၇၄ နှစ်အမျိုးသား - YOYARLAY Digital Media and News
မကြာသေးခင်ကမှ ဖလော်ရီဒါနိုင်ငံက အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ မိကျောင်းခေါင်းတိုရဲ့ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူ့ခွေးလေးရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် မိကျောင်းခေါင်းတိုနဲ့ နပန်းလုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကဆိုရင် လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး လူတွေက သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက် ချီးမွှမ်းစကားဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသားဟာ ရစ်ချက် ဝီလ်ဘန့်ခ် (Richard Wilbanks) ဆိုသူဖြစ်ပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခင်က သူဟာ (၃) လသားအရွယ်ခွေးလေးနဲ့ ကန်နားတစ်ဝိုက်မှာ လမ်းလျှောက်နေခဲ့တာပါ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို မိကျောင်းခေါင်းတိုက ရေထဲကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ရစ်ချက်နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ခွေးလေးကို ကန်ထဲဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ကန်နားလမ်းလျှောက်နေတုန်း မိကျောင်းခေါင်းတို ရေထဲကထွက်လာခဲ့တာဟာ ဒီလောက်မြန်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။ မိကျောင်းခေါင်းတိုက အရမ်းမြန်တာပဲလို့ ရစ်ချက်က ဆိုပါတယ်။
ရစ်ချက်လည်း သူ့ခွေးလေးကို မိကျောင်းက ကိုက်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတာကို မြင်မြင်ချင်းမှာပဲ ခွေးလေးကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် ရေထဲချက်ချင်းခုန်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိကျောင်းခေါင်းတိုက အရှည် (၂) ပေဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ကိုင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းမခက်ခဲခဲ့ပါဘူး။ (၄) ပေရှိတဲ့ မိကျောင်းခေါင်းတိုတစ်ကောင်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိကျောင်းပါးစပ်ကို ဖြဲထားဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ ရစ်ချက်က မိကျောင်းခေါင်းတိုကို ရေထဲကနေ ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ကန်စပ်နားကို ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ မိကျောင်းပါးစပ်ပွင့်လာဖို့အတွက် သူ့လက်နဲ့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မိကျောင်းပါးစပ်ကနေ ခွေးလေးလွှတ်သွားနိုင်လောက်တဲ့အခါ ရစ်ချက်က မိကျောင်းရဲ့ပါးစပ်ကို ဖြဲထားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ခွေးလေးလည်း လွှတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရစ်ချက်ရဲ့လက်တွေကတော့ ဝါးမြိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်ကူးထားခဲ့တာက Florida Wildlife Federation and fSTOP Foundation တို့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Wildlife Camera ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က Sharing The Landscape လို့ခေါ်တဲ့ ကမ်ပိန်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးထားဖို့ပါပဲ။ လူတွေရဲ့အနီးနားမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာ လူတွေ နားလည်အလေးထားဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရစ်ချက်က မိကျောင်းခေါင်းတိုကြောင့် သူ့ရဲ့ခွေးလေးသေဘေးကြုံခဲ့ရပေမဲ့ မိကျောင်းခေါင်းတိုတွေက သဘာဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး လူသားတွေရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကန်ကနေ မိကျောင်းခေါင်းတိုတွေကို မဖယ်ရှားချင်သလို ဖျက်လည်းမဖျက်စီးပစ်ချင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ရစ်ချက်က သူ့ခွေးလေးကို လမ်းလျှောက်ခေါ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုတစ်ခါမှာတော့ ကန်နားမရောက်အောင် ကန်နဲ့ အနည်းဆုံး (၁၀) ပေအကွာကနေ ခွေးလေးနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်နေပါတယ်။
Ref: BoredPanda “74 Y.O. Florida Man Wrestles Alligator To Save His3M.O. Puppy”
အသက် ၇၄ နှစ်
Previous Previous post: ရေကြောင်းတပ်ဖွဲ့သင်တန်းကျောင်းကနေ အတူတူဘွဲ့ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ မိသားစု (၂) စုက ညီအစ်မတွေ
Next Next post: ရေဓာတ်မပြည့်ဝအောင် သတိမထားမိဘဲ လုပ်မိနေတဲ့အမှားများ